Billy Graham | Calvary Burmese Church
December 1, 2010 December 21, 2012 / Peter Lwin
အမေရိကန်နိုင်ငံသား ဘီလီဂရေဟမ်သည် ကမ္ဘာ့သမိုင်းတွင်ခရစ်ယာန်တို့၏ ယုံကြည်ခြင်းကို လူအများဆုံးတို့ထံသို့ဟောပြောသူ၊ ကြားသိလက်ခံစေသူ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ခံရသူဖြစ်သည်။ သူ၏ Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) မှထုတ်ပြန်သည့် စာရင်းဇယားအရ နိုင်ငံပေါင်း ၁၈၅ နိုင်ငံမှ လူသန်းပေါင်း ၂၁၅ သန်းခန့်သည် သူ၏ Ministry နှင့်ထိတွေ့ကာ ၀ိညာဉ်ခွန်အား ရယူနေကြသည်ဟု ဆိုသည်။ သူ၏အသက်တာတွင် ထောင်နှင့်ချီသော လူတို့အား သခင်ယေရှုကို မိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အရှင်သခင်အဖြစ် လက်ခံယုံကြည်စေရန် ဘုရားသခင်က အသုံးပြုခြင်းခံရသည်။
သူသည် ၁၉၁၈ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့တွင် မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၊ ရှားလော့ မြို့၏လယ်ယာတစ်ခု၌မွေးဖွါးပြီး Wikipedia online Encyclopedia တွင်ဖော်ပြချက် အရ သမ္မတ ထရူးမင်းမှစ၍ လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတ အိုဘားမားအထိ အမေရိကန် သမ္မတပေါင်း (၁၂) ဦး၏ ၀ိညာဉ်ရေးအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ (Washington Post, Time Magazine ) Time Magazine တွင်ဖော်ပြချက်အရ သမ္မတ အိုဘားမားသည် Billy Graham ထံ သွားရောက်တွေ့ဆုံလည်ပတ်သော ပထမဦးဆုံးသော အမေရိကန်သမ္မတဖြစ်သည်။ Gallup’s list of admired people တွင် ၂၀ ရာစုလူသားတို့၏ ကြည်ညိုလေးစား ခြင်း အခံရဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် (၁၈) ဦးတွင် (၇) ယောက်မြောက်ဖြစ်ပြီး ၁၉၉၃ ခုနှစ်အထိ လူ ၂.၅ သန်းသည် သူဟောသည့် တရားဟောစင် ရှေ့သို့လာရောက်၍ မိမိကိုယ်ကို ယေရှုခရစ်သည် မိမိ၏ကယ်တင်ပိုင်ရှင် သခင်ဖြစ်ကြောင်းကြော်ငြာ၍ ဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့ကြသည်။
တရုတ်နိုင်ငံတွင် သာသနာပြုလုပ်လျှက်ရှိသည့် ဆရာဝန်လည်းဖြစ်သော မီရှင်နရီ တစ်ဦး၏ သမီးဖြစ်သူ Ruth McCue Bell နှင့် ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင်လက်ထပ်သည်။ သူတို့တွင်သမီးသုံးယောက် နှင့် သား နှစ်ယောက် ထွန်းကားသည်။ သူ၏သားတစ်ယောက် ဖြစ်သူ Franklin Graham သည် ဖခင်၏ Billy Graham Evangelistic Association ကို ဆက်လက်ဦးဆောင်သည်။ မြေး ၁၉ ဦးရှိပြီး မြစ် အမြောက်အများကိုလည်းဘုရားသခင်က ပေးထားသည်။ အသက်အရွယ်ရလာပြီဖြစ်သဖြင့် မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ်၏ တောင်ပေါ်အိမ်ကလေးတွင် အေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေထိုင်လျက်ရှိသည်။ သူ၏ချစ်လှစွာသော ဇနီးသည် အသက် (၈၇) နှစ်အရွယ်၊ ၂၀၀၇ ခုနှစ် ဂျွန်လ (၁၄) ရက်နေ့တွင်ခေါ်တော်မူခြင်း ခံခဲ့ရသည်။
သူ၏အသက် (၁၆) နှစ်အရွယ်၊ ၁၉၃၄ ခုနှစ်တွင် Mordecai Ham ဆိုသူဦးဆောင်သော နိုးကြားရေးဝတ်ပြုအစည်းအဝေး တစ်ခုတွင် သူ့ကိုယ်သူဘုရားသခင်၏ လက်တော်သို့အကြွင်းမဲ့ ဆက်ကပ်အပ်နှံခဲ့သည်။ ယနေ့ Trinity College ဟုနာမည်ပြောင်းထားသော Florida Bible Institute မှဘွဲ့ရခဲ့ပြီး ၁၉၃၉ ခုနှစ်တွင် Southern Baptist Convention ၏ လက်တင်မင်္ဂလာ (Ordination) ပေးခြင်းခံရသည်။ ၁၉၄၃ ခုနှစ်တွင် Wheaton College မှနောက်ထပ်ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပြီး အီလီနွိုက်ပြည်နယ် Western Springs ရှိ First Baptist Church တွင်အမှုတော်ဆောင်သည်။ ထိုနောက် Youth for Christ အဖွဲ့ထဲသို့ဝင်ရောက် အမှုတော်ဆောင်ခဲ့သည်။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးကာစ အချိန်များတွင် သူသည် အမေရိကန်နိုင်ငံသာမက ဥရောပနိုင်ငံ များသို့ပါသွားရောက်၍ တရားဒေသနာများကိုဝေငှသဖြင့် တက်သစ်စဧ၀ံဂေလိ တရားဟောဆရာကလေး အဖြစ်ဖြစ် လူသိများလာသည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ်တွင် လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ် တွင်ပြုလုပ်သော သူ၏တရားဟောပြောပွဲကြောင့် သူ့ကို တစ်ကမ္ဘာ လုံးမှ ဂရုစိုက်စရာဖြစ်လာက အသိအမှတ်ပြုခြင်းကိုခံရသည်။
၁၉၅၀ ခုနှစ်တွင် သူ၏ Billy Graham Evangelistic Association (BGEA) ကို မင်နီယာပိုးလိစ် ပြည်နယ် မင်နီစိုးတား မြို့တွင် တည်ထောင်ပြီး ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် မြောက်ကယ်ရိုလိုင်းနားပြည်နယ် ရှားလော့ မြို့သို့ပြောင်းရွှေ့သည်။ ထိုအမှုတော်တွင် အောက်ပါတို့ကို လုပ်ဆောင်သည်။
· အပတ်စဉ် “Hour of decision” ရေဒီယိုအစီအစဉ်။
· ခြောက်နှစ်တစ်ကြိမ်ပြုလုပ်၍ ရုပ်သံအစီအစဉ်နှင့် လွှင့်သောအထူးခရူးဆိတ် တရားဟောပြောပွဲ။
· နိုင်ငံတကာသို့ဖြန့်ဝေသော “My Answer” ကော်လံ သတင်း (newspaper column)။
· “Decision” မဂ္ဂဇင်း၊ BGEA ၏ ပုံမှန်ထုတ်ဝေသောမဂ္ဂဇင်း။
· ဧ၀ံဂေလိနှင့်ဆိုင်သော ရုပ်ရှင် တိုထွါများ။
ယနေ့ အသက် ၉၀ ကျော်ပြီဖြစ်သော Billy Graham နှင့် သူ၏ Ministry ကို တကမ္ဘာလုံးမှ သိရှိပြီး၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်မဟုတ်သူများကပင် ကြည်ညိုလေးစားချစ်ခင်ရသော ပုဂ္ဂိုလ် ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ သူရေးသားသော စာအုပ်ပေါင်း (၂၆) ခန့်ရှိကာ ဘာသာပေါင်း မြောက်များစွာတို့သို့ ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း ခံရသည်။ အောက်ပါစာအုပ်တို့သည် နာမည်ကျော် လူကြိုက်များသည်။
Just As I Am (Autobiography – 1997)
Facing Death and the Life After (1987
Approaching Hoofbeats: The Four Horsemen of the Apocalypse (1983)
Angels: God’s Secret Agents (1975)
The Templeton Foundation Prize for Progress in Religion.
The Ronald Reagan Presidential Foundation Freedom Award.
The Big Brother of the Year Award.
Cited by George Washington Carver Memorial Institute for contributions to race relations.
Recognized by Anti-Defamation League of B’nai B’rith and National Conference of Christians and Jews for efforts to foster better understanding among faiths.
Inducted into the Gospel Music Hall of Fame in 1999.
ဆရာကြီးပါဝင်ခဲ့သည့်အောက်ပါ အဖြစ်အပျက်များကိုလည်း သမိုင်းတွင်မှတ်တမ်းတင် ထားပါသည်။
9/11 အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံခြင်းအတွက်ပြုလုပ်သော နိုင်ငံတော်ဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၊ (September 14, 2001)
December 2001 တွင် (KBE) honorary knighthood သူရဲကောင်းဘွဲ့ချီး မြှင့်ခံရခြင်း။
၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ Lyndon Johnson ၏ဈာပနအခန်းအနားကိုဦးဆောင်ခြင်း။
၁၉၉၄ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ Richart Nixon ၏ ဈာပနအခန်းအနားတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားခြင်း
၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ Ronald Reagan ၏ဈာပနအခန်းအနားတွင် လည်းဦးဆောင်ရန်ဖြစ်သော်လည်း ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် မပါဝင်နိုင်ခဲ့ပါ။
မှတ်ချက်။ အောက်ဖော်ပြပါ ၀က်ဘ်ဆိုဒ် များမှကောက်နှုတ်ထားပါသည်။
Billy Graham, Thawngno
← Rev. Dr. Zaw Lay (SBMC)
လက်တုန့်ပြန်ခြင်း(ဂလဲ့စားချေခြင်း) ၁ →